Ememme maka oge Ropeway na Denizli - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean20 DenizliEmemme maka pedgbọ njem Car USB na Denizli
10 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 20 Denizli, Mpaghara Aegean, General, Gondola, Isi akụkọ, Turkey, TELPHER 0
nhazi oriri maka ọrụ ụgbọ ala
N’inye ụgbọ njem na Bağbaşı Plateau na Denizli, ụgbọ ala USB rụzigharịrị oge ọrụ ya n’oge Eid iji hụ na ụmụ amaala na-etinyekwu oge n’oge Eid al-Adha.
Obodo Denizli mepere emepe jiri eriri Urban na Bağbaşı Plateau mepee ọrụ n'etiti ụgbọ ala USB, nke edoziri maka Eid al-Adha.
Citizensmụ amaala gosipụtara mmasị dị ukwuu, ọkachasị n'oge ụbọchị sịnịma maka oge ọrụ ebe a na-eme njem na ebe ntụgharị ahụ gbanwere. Cablegbọ ala USB Denizli 'Anyị na-arụ ọrụ n’oge ezumike' kwupụtara nhazi ọhụrụ yana aha ya.
Xbọchị 1 (11 August Sọnde)
2.Day (12 August Mọnde)
3. (Bọchị (13 August Tuesday)
4. (Bọchị (14 Ọgọst Wenezde)
Denizli USB Car
The cable ụgbọ ala Denizli, Turkey si rụọ cable ụgbọ ala n'obodo Denizli. Rozọ ahụ bụ ụgbọ ala USB kachasị ogologo na Mpaghara Aegean nke nwere mita 1.500 n'ogologo. Ọ na-ebugharị njem na Bagbasi Plateau. Mpaghara dị ala na-erute mita 300 na ọdụ dị elu erute mita 1.400.
Ordi Boztepe Cable Carcks 23 / 06 / 2017 Ordu Boztepe Ropeway Hout Feast Arrangement: ORBEL A.Ş., onye enyemaka nke Ordu mepere Obodo. Oge ọrụ nke Ordu-Boztepe Cable Car Line nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ bụ nke a hazigharịrị n'oge oriri nchegharị nke Ramadan. Mpaghara etiti nke Altinordu na Boztepe 2 puku 350 mita dịpụrụ adịpụ site na ụgbọ ala USB nke na-agba n'ụlọ 28, ezumike 1. N'agbata awa 14.00 na 24.00, 2. na 3. na 10.00 na 24.00.
Usoro Mgbakọ Mgbụsị akwụkwọ maka Cable Car Clocks na Bursa 14 / 09 / 2018 Turkey si Uludag site cable ụgbọ ala ga-abụ ịdọ aka ná ntị bịara otu n'ime ihe ndị kasị mkpa oyi njem emmepe na ọdịdị. Na ụlọ 140, 500 nwere ike ibu otu puku ndị njem 9 otu awa, na 17 bụ ụzọ kachasị elu ụwa kachasị elu. Nkwupụta ụda nke Teleferik AŞ, na 09.00-19.00-09.00 awa site na Satumba iji jee ozi. Ụgbọ ala nke ụgbọelu na-ebu ndị njem n'oge awa 21.00-XNUMX n'oge okpomọkụ.
Nhazi nke Afọ Ọhụrụ maka Ropeway 28 / 12 / 2018 Turkey kasị mkpa oyi na Christmas n'abalị na cable ụgbọ ala gondola inwego maka ezumike na-achọ na-aga Uludağ, onye nke ọdịdị njem emmepe ga-agba ọsọ ruo mgbe xnumx'y. ụmụ amaala na-achọ ịga Uludağ, otu n'ime ihe ndị kasị mkpa emmepe nke oyi njem Turkey site na-eke ogologo queues ìgwè ewu na atụrụ na skai lifts. Site na 02.00 cabins, Bursa cableway, okporo ụzọ ụwa kasị ogologo nkwụsị na 176 mileage, nwere ike na-ebu otu puku 500 njem kwa awa, agbatịwo oge ọrụ maka afọ ọhụrụ. Bursa Cable Car Officer Ersoy O, "Anyị agbatịwo oge ọrụ maka ụmụ amaala chọrọ ịbanye New Year na Uludag. 9 ruo 31 n'abalị nke December ...
Oge okpomọkụ maka Oghere Car Clocks na Denizli 20 / 04 / 2018 E gbanwere oge maka Denizli Cable Car ọrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, Denizli Cable Car Evenings ga-arụ ọrụ. E toro ogologo oge nke ọrụ ụgbọ ala USB nke Bağbaşı Plateau nke Denizli Metropolitan Municipality. Enwere oru ohuru a taa. Na eriri ụgbọ ala dị n'etiti Osimiri Urban na Bağbaşı Plateau, nke Denizli Metropolitan Municipality meghere na October nke 2015, a maliteghachiri oge nke ụgbọ elu ahụ ka ihu igwe dị ọkụ. Ụmụ amaala, karịsịa na ngwụsị izu gosipụtara mmasị dị ukwuu na ụgbọ ala, tinyere ndokwa ọhụrụ 20 na Eprel, malite na Eprel na ụtụtụ nke izu-amalite na 10.00'da, abalị ga-agwụ na 21.00'te. Na ngwụsị izu, ụgbọ elu ga - adị n'etiti oge 09.00-21.00. Site na ndokwa ohuru, ndi Denizli nwere ohere ichota obodo site na Bağbaşı Plateau ...
Iwu Ụbọchị Ramadan maka Oge Ụgbọ njem na Erzurum 05 / 05 / 2019 Na ọnwa nke Ramadan na Erzurum ọha iga e mere ndokwa ka akara ọgwụgwụ nke ìhè ego oge. Sahur tupu ọnwa nke Ramadan ruru ka ụmụ amaala na obodo mepere emepe n'ụzọ edoghi, tarawih, Ramadan eme, na-elekọta mmadụ na-eme na-ewere oge ha ji ọtụtụ awa shopping e mere ndokwa oge ikpeazụ. Ntem G7, B2, B3, G4 ikpeazụ oge na oge edoghi G5 24: 00, B1, G1, G9, oge ikpeazụ elekere na G7 akara 23: Kere ka 30. Ọchịchị kọrọ ihe ndị ọzọ nile e ulasim.erzurum.bel.t ọmụma zuru ezu banyere oge ikpeazụ na awa na Erzurum Metropolitan Municipality, ụmụ amaala nwere ike irite uru na www.erzurum.bel.t web page. N'aka nke ọzọ Erzurum Metropolitan ...
Ụbọchị Afọ Ọhụrụ site na Sameria ruo Oge Awa Ọhụụ 31 / 12 / 2013 New Year Timetable site na Samulaşt ka Oge njem: Onye na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè SAMULAŞ emeela ndokwa ọhụrụ maka njem ụgbọelu ya na New Year Eve. Onye na-ahụ maka ụgbọ okporo ígwè SAMULAŞ mere ndokwa ọhụrụ maka ụgbọelu na-aga n'ihu na New Year's Eve. Dịka nkwupụta sitere n'aka SAMULAS, 31 gbasaara 23.45 na Tuesday nke ụtụtụ nke ọnwa Janị na ụgbọ elu ndị kwupụtara na 01.00 ka e nyere 23.00. 00.00 na Tram na Express December 31 Tuesday ga-esote usoro njem ụbọchị izu ụka na ịgbaso 2013, a ga-etinye nkwụsị ndị a. Agụmakwụkwọ Tram Express University University nke UniversityStat Junction-23.00-23.00-23.0022.00 22.00-23.18-23.1822.20 22.20-23.30-23.3022.40-22 40-23.45-23.4523.00
Oge Ramadan maka njem njem Adana 17 / 07 / 2014 Adana Metro timetables Ramadan ọnọdụ:-aza na-arịọ nke ụmụ amaala nke Adana Metropolitan Municipality ọchịchọ siri ike n'abalị nke ụgbọ oloko njem n'oge Ramadan 23: 00 iji amalite na uzattı.uygul ma 17.07.2014 na 21: 00-23: n'etiti 00 awa ga-eje ozi na 15 nkeji etiti oge.
BursaRayın Oge Ụgbọ Ọhụrụ Ntọala Afọ Ọhụrụ 29 / 12 / 2016 Ụbọchị Ọhụrụ nke BursaRay Setting: Municipality Metropolitan Bursa, 2016, nke jikọtara 2017 na 31 Disemba Saturday mgbede na 1 January Sunday weere nlezianya maka ụmụ amaala ka ha nọrọ na nchedo na udo. Magazin Mayor Recep Altepe kwuru na ibi na Bursa, obodo nke bara uru ụwa, bụ ihe ùgwù. "Bursa agwụla afọ 2016 na-etinye ego ndị bara uru na ndị pụrụ iche. Ruo taa, anyị emeela ọtụtụ ihe ndị dị mkpa site na njem gaa egwuregwu, ọdịbendị omenala na gburugburu ebe obibi. Anyị kwenyere na Bursa ga-anọgide na-abụ obodo nke weere 'akpa' ya na 2017 dị ka ọ dị na mbụ. Ahụ ike 2017 maka ụmụ amaala anyị niile,
Egwuregwu Ịhazi Oge Metro na Istanbul 26 / 08 / 2018 Metro Istanbul, onye enyemaka nke obodo Istanbul Metropolitan, mere ka ụgbọ elu ya gaa na 01.00 na mpaghara niile na-eme egwuregwu na echi. Akwụkwọ ndekọ Metro Istanbul nke Twitter, ọkwa ahụ edere dị ka ndị a: "Ndị njem, 26 August Sunday na 21.45 ga-akpọ Besiktas-Antalyaspor na 27 August Monday ga-akpọ na 21.45 Galatasaray-Alanyaspor oge niile n'ihi 01.00 flights. Anyị na-achọ ka ihe ịga nke ọma na ọganihu dị mma na ìgwè anyị nile. "
Nhazi ohuru maka oge ezumike ahia na Eskisehir 26 / 05 / 2018 ESTRAM, na mgbakwunye na nke Action Center odude ọzọ na Central n'ọdụ ụgbọ ala na-enye a ọhụrụ ije maka trams-eje ozi na Tepebasi ọrụ. Batıkent- SSK na mbụ na n'oge ikpeazụ Çamlica oge tram ụzọ gasị na ugboro ọhụrụ center ga-eji tram Navigating Social Security mgbanwe. M ESTRADA Batikent Movement na Central Area na mberede na-aghọ dị ka nke May 28 2018 Monday. ndokwa ndị e mere site ESTRADA oge mbụ na na ọdụ ụgbọ ala-Batikent, n'ọdụ ụgbọ ala-Çamlica, oge ikpeazụ Batıkent- n'ọdụ ụgbọ ala, Çamlica-Bus tramway anamde na a kagbuo a Batikent Movement na n'otu ntabi anya Center site n'ututu tupu mmalite nke oge Batikent, ...
Ụgbọ okporo ígwè Denizli
Ọ bụ ụgbọ okporo ígwè Denizli
Ordi Boztepe Cable Carcks
Nhazi nke Afọ Ọhụrụ maka Ropeway
Oge okpomọkụ maka Oghere Car Clocks na Denizli
Ụbọchị Afọ Ọhụrụ site na Sameria ruo Oge Awa Ọhụụ
Oge Ramadan maka njem njem Adana
BursaRayın Oge Ụgbọ Ọhụrụ Ntọala Afọ Ọhụrụ
Egwuregwu Ịhazi Oge Metro na Istanbul
Nhazi ohuru maka oge ezumike ahia na Eskisehir